theZOMI: Burma News International - March 26, 2013
Burma News International - March 26, 2013
Farmers in Karen State have been told to apply for land concession of their farmland that were either confiscated or were sold off by officials in the previous military government before the 2010 national election.
Nasaka (Burma’s border security force) still haven’t released3Bangladeshi policemen and one civilian arrested several weeks ago, according to border sources.
Buddhist monk organization warns public to keep out of sectarian violence
Following the murderous violence between Buddhist and Muslim communities in Meikhtila Town last week,aprominent Buddhist monk organization has forbid its congregation to be involved in sectarian violence.
The Karen Refugees Committee has issuedastatement outlining its position on the repatriation of Karen refugees on the Thai-Burma border.
လူအများအပြား သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ မီးလောင်ကျွမ်းမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ရှိ
သောကြာနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မီးလောင်ကျွမ်းမှုဟာ ၀ါးနဲ့ဖက်တို့ဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ဒုက္ခသည် နေအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မှာ မီးစတွေ ကျလာရာကနေ စတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း မျက်မြင်တွေက ထိုင်းရဲတွေကို ပြောပြခဲ့တဲ့ အတွက် တောမီး ကနေစလောင်တာလား ဒါမှမဟုတ် ထမင်းချက်ရာကနေ ပေါ့ဆမှုကြောင့် လောင်တာလားဆိုတဲ့ အချက်နှစ်ခုပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေး မှု တွေပြုလုပ်သွား မယ်လို့သိရပါတယ်။
နေ့စဉ် သတင်းစာ ၈ စောင် ထပ်မံခွင့်ပြု၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် စိန်ခေါ်မှု များမည်
ပုဂ္ဂလိက နေ့စဉ် သတင်းစာ ထုတ်ဝေရန် လျှောက်ထားသူများအနက်မှ ဒုတိယ အသုတ်အဖြစ် နောက်ထပ် ၈ စောင်ကို ထပ်မံခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။
ခိုနူမ်းထုန် သတင်းဌာနကို ဂျာနယ် ထုတ်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီ
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ၊ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည် သူ့ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန (မူပိုင်ခွင့်နှင့် မှတ်ပုံတင် ဌာနခွဲ) မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ (၂၂) ရက်စွဲဖြင့် ခိုနူမ်းထုန် သတင်းဌာန ၏ လစဉ်သတင်း ဂျာနယ် (မြန်မာဘာသာ) အား ထုတ်ဝေ ခွင့်ပြုလိုက်သည်။
ဓါတ်ငွေ့စီမံကိန်းမှ စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများက ဒေသခံ လုပ်ငန်းများ ထိခိုက်စေ
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တွင် ရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ စီမံကိန်းမှ စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများကြောင့်် ဒေသခံ လူထု၏ အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်နေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ကချင်စစ်ဘေးသင့် ကလေးများအတွက် ရံပုံငွေရှာပွဲ မူစယ်တွင် ကျင်းပ
ကချင်စစ်ဘေးသင့် ကလေးငယ်များအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍများ၌ ထောက်ပံ့ရန် ရံပုံငွေရှာဖွေပွဲ တစ်ခုကို မဇ္ဇျိမလှိုင်း တေးဂီတအဖွဲ့က ကမကထပြု၍ သျှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) မူစယ်မြို့၌ ဖျော်ဖြေ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည် ။
စိုင်းအောင်မြတ်အား အမှုတခုခုဖြင့် တရားစွဲဆို အပြစ်ပေးရန် တရုတ်တောင်းဆို
အစိုးရသက်သေအဖြစ် လိုက်ပါပေးခဲ့သူ စိုင်းအောင်မြတ်အား မြန်မာအစိုးရထံ ပြန်ပို့ပြီးနောက် အမှုတခုခုဖြင့် တရားစွဲဆိုရန် တရုတ်အစိုးရက တောင်းဆိုလိုက်သည်ဟု ကျိုင်းတုံ ဝန်ထမ်းအသိုင်းအဝိုင်းက ပြောသည်။
SNLD ၏ ၆ လပတ် အစည်းအဝေး အမျိုးသမီးနှင့် လူငယ်များ ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်း
သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ၏ ၆ လပတ် မြို့နယ်စုံညီ အစည်းအဝေးကို မတ်လ ၂၄-၂၅ ရက်များက လားရှိုး၌ ကျင်းပရာ အမျိုးသမီးနှင့် လူငယ်များ ပါဝင်သည့် အလုပ် အမှုဆောင်အသစ် နှင့်ဆပ်ကော်မတီကို ရွေးချယ် ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ငပလီ ခရီးသွားလုပ်ငန်း တိုးတက်လာ၊ မြောက်ဦးတွင် အရှုံးပေါ်
ရခိုင်ဒေသအတွင်း ငပလီနှင့်မြောက်ဦး ထင်ရှားသော ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းနှစ်ခု ရှိသည့် အနက် ငပလီ ဒေသ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ အရှိန်မြင့် တိုးတက်နေသော်လည်း မြောက်ဦး ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာမူ ယခုနှစ်အတွင်း ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ဒေသခံ ဟိုတယ် လုပ်ငန်းရှင်များက ဆိုသည်။
လိုင်ဇာ ဒုက္ခသည်များကို ဗကသ ကူမည်
ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် ကချင်ပြည်နယ်၊ လိုင်ဇာမြို့ရှိ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များဆီသို့ အရောက်သွား၍ ကူညီမှုများ လုပ်ရန် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (ဗကသ) ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ၆ ဦး အင်္ဂါနေ့က တရုတ် နယ်စပ် ဂျယ်ဂေါင်သို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။
ကရင်နီ ဒုက္ခသည်စခန်းကို ကယားပြည်နယ် အစိုးရက ငွေကျပ် သိန်းတရာ ကူညီ
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်က မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အမှတ် ၂ မယ်စူရင်း ကရင်နီဒုက္ခသည်စခန်းသို့ ကယားပြည်နယ် အစိုးရက ငွေကျပ် သိန်း တရာ နှင့် အဝတ်ထုပ် ၂၉ ထုပ်ကို ကားဖြင့်စေလွှတ်ကာ သွားရောက် အကူအညီပေးရေး ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ပြည်နယ် လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးကိုးရယ်က ပြောပါတယ်။